सम्मेलन राजनीति | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय सम्मेलन राजनीति
on: १५ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०६:२१ सम्पादकीय
काठमाडौंमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन जारी छ । सम्मेलनमा भारत बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, भुटान र म्यानमारका सरकार प्रमुख सहभागी छन् । बिमस्टेकको सम्मेलन २०१६ मै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, नेपालले यसको आयोजना गर्न सकेको थिएन । अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर एउटा गरिब राष्ट्रले जनतालाई अनेक सास्ती खुवाएर यत्रो तामझामका साथ आयोजना गरेको सम्मेलनले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ त भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
साना साना देशहरूको समूह मिलेर आपसी हित प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय समस्या समाधान गरेर विकासका लागि पहल गर्ने परम्परा विश्वभरि नै छ । यस्ता संगठन र राष्ट्रहरू बीच भएका सम्झौताले देशहरू लाभान्वित भएका पनि छन् । तर, नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्क प्रभावकारी बन्न सकेन । सार्क शिथिल रहेको बेला बीबीआईएन र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरू विकल्पका रूपमा देखिएका छन् । अहिले नेपाल सार्क र बिमस्टेक दुवैको अध्यक्ष छ । बिमस्टेकको उद्देश्य सम्पर्क सञ्जाल, विस्तार र आर्थिक विकास हो । नेपालको हालको प्राथमिकता पनि यातायात, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, वातावरण र क्षेत्रीय व्यापार हो । तैपनि सम्मेलनले यसका लागि ठोस निर्णय गर्छ भन्ने आधार केही देखिन्न, विगतमा जस्तै कागजी घोषणापत्रमा सम्मेलन सीमित हुने आकलन छ । नेपालको विकासका लागि भारत, चीन र बङ्गलादेश रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । नेपालले बिमस्टेकबाट भन्दा पनि यी मुलुकसँगको साझेदारी र सम्झौताबाट बढी लाभ लिन सक्थ्यो, तर त्यसका लागि कूटनीतिक पहल खासै भएको पाइन्न ।
सम्मेलनलाई भव्य बनाउने नाममा लापर्बाही र अनावश्यक ढङ्गले खर्च गरिएको छ । वर्षौंदेखि जनताले आवाज उठाउँदा खाल्डाधरि नपुर्ने सरकार अहिले हिलोमाथि रङ्ग लगाउँदै छ, पानीमाथि पीच गर्दै छ, फोहोरमाथि खोल हालिएको छ ।
नेपालबाट निर्यात हुन सक्ने उत्पादनहरू ज्यादै सीमित छन् । तर, सम्भावना बोकेको ऊर्जाको निर्यात गर्ने ढोका खोल्ने हो भने अहिलेको व्यापार घाटालाई निकै तल झार्न सकिन्छ । यसका लागि बङ्गलादेशसँग सम्पर्क सञ्जाल स्थापना हुनुपर्छ । यसका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । तेस्रो पक्षको लगानीमा उत्पादित बिजुली आयात नगर्ने भारतीय नीतिले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । यो समस्याको हल बिमस्टेकले निकाल्न सक्दैन ।
सार्कभन्दा बिमस्टेक कान्छो संगठन हो । स्थापनाको दुई दशक पार गरेता पनि यसको न घोषणापत्र छ न त सचिवालय नै । नेपाल नतातेको भए अझै दुई वर्ष यो सम्मेलन हुने थिएन । बङ्गलादेशको राजनीतिक समस्याका कारण ऊ सहभागी हुनै चाहेको थिएन । ओलीको “विशेष आग्रह” मा उनी नेपाल आएकी हुन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले पत्रकारहरूलाई बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई निकै जोड दिए पनि यसबाट देशलाई हुने फाइदा खासै देखिन्न । यसको अर्थ बिमस्टेक सम्मेलन गर्नै हुन्थेन भन्ने होइन । यसबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि केही राम्रो बन्न सक्ला, पर्यटनका लागि प्रचारको माध्यम पनि बन्ला । तैपनि अर्बौं रुपिया खर्चेर रातारात टालटुले विकास गरेर गरिएको सम्मेलनबाट नागरिकले के पाउलान् ? देशलाई तत्कालीन वा दीर्घकालीन केही फाइदा छ ? यो स्पष्ट छैन । सम्मेलनलाई भव्य बनाउने नाममा लापर्बाही र अनावश्यक ढङ्गले खर्च गरिएको छ । वर्षौंदेखि जनताले आवाज उठाउँदा खाल्डाधरि नपुर्ने सरकार अहिले हिलोमाथि रङ्ग लगाउँदै छ, पानीमाथि पीच गर्दै छ, फोहोरमाथि खोल हालिएको छ । तर, एउटा सम्मेलन भवनसमेत नभएको र मित्र राष्ट्र चीनले बनाइदिएको भवनसमेत व्यवस्थापिका संसद्ले कब्जा गरेको अवस्थामा सम्मेलनले मुलुकको लाज कति जोगाउँछ भन्न सकिन्न । तैपनि यसो गर्नुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थ केही छ भन्न सकिन्छ । विगतको प्रचलनभन्दा विपरीत ठाउँ ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीका ठूला ठूला फ्लेक्स बोर्ड राख्नुले पनि सम्मेलनको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो ।
पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन भारतले बिमस्टेकलाई बढी महत्त्व दिएको आरोप लागेको छ । यस्तोमा नेपालले सम्मेलन आयोजना गर्दा नेपालको असंलग्न छविमा असर पर्न सक्छ । नेपालका कूटनीतिक पहलहरू व्यक्तिगत लहडबाट भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र क्षमताले निर्देशित हुनुपर्छ । यस्तोमा बिमस्टेकबाट नेपालले कस्तो लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा भविष्यकै गर्भमा लुकेको छ तर यसबाट प्रधानमन्त्री के पी ओलीले भने प्रशस्तै लाभ लिने पक्का छ ।